Semalt Inotsanangura Mazano Okuchengeta Purogiramu Yenyu Mobile-Shamwari
teleprompter on computer.5;text-align:justify;"> Mumakore makumi maviri akapfuura, zvigadzirwa zvemagetsi zvave zviri kutora mahwendefa ekufurisaiyo yewebhu inogadziriswa pamutambo wekutsvaga. Nokuda kwechikonzero ichi, mitsva yakawanda yakafanana neGoogle yakashandura ku Search Engine Optimization seimwe yenzira dzokukwirira zvakakwirira mumibvunzo yavo yekutsvaga. Mabhizimisi ane ruzivo rwekushandisa nzira iyi sekutsvaga kwema digital kududzirakuwedzera kuonekwa kwechiratidzo chayo kune vakawanda vatengi munyika yose. Zvisinei, kushandisa chirevo ichi kune bhizinesi uye webhusiro yekutsvaga kweteiri nyore.
Zvikonzero zvinotevera, zvinotsanangurwa naIvan Konovalov, Mutengi weKuteresi Achibudirira Semalt Digital Services, ichawedzera SEO yako mumutambo wes mobile:
Kuwanda kweInstredive Interstitials sePop-Ups;
Small Fonts (inokurudzirwa kukosha i16 pt.);
Flash (Haibatsirwi pamafaira akawanda efoni) Inogona kutungamirira kune chirango chekuvanzwa zvakachengetwa);
Kwenyanzvi Kukanganisa uye Bugs;
Kuwedzerwa kwezwi Shoko reMashoko anopfuura 700;
Zvisina kumira zviduku zviduku zvakadai seBhitani uye Mabhokisi ekuongorora;
Kuisa zvinyorwa zvinyorwa mune kunze kweZvibvumirano zveimwe nzvimbo;
Kuwedzerwa kweZvipano zveSingapindi (inofanira kuva 75% pasi pedhidhiyo).
Izvi zvingangodaro zvinogona kuva zvakaipa kune SEO yako yefodya, uye vachakukwezva website yakopasi kana zvisina kuchinjwa zvakanaka. Zvisinei, dzimwe shanduko pamafaira enyu anotarisa mafoni achawedzera SEO yako. Izvi zvinotevera kugadziriswa ndezvokutizvinodiwa kuti foni yako yekufona ione:
1. Kuvandudza nzvimbo yako yepaiti yakakurumidza.
Google inosarudza foni yekufambisa nguva yekukurumidza nokuti inokanganisa user pfungwa uyekushandiswa kwewebsite. TsvagaMetrics, mu Mobile Mobile Factors kudzidza, inoshuma kuti nguva yekutakura yemasekondi 1.10 inogona kuita nzvimbo yepamusorokumusoro 10 asi dhewhesi chete kusvika ku17.1 zvidzidzo pamutambo wefoni zvinogona kuunza nzvimbo yepamusoro pe 35. Site speed ndeimwe yezvinhu zvehutano iweinofanira kuwedzera pamashizha ako efoni.
2..Shandisa AMP (Accelerated Mobile Pages).
AMP inotora HTML neCSS code, zvinoreva kuti zviri nyore kuchengetedza cache uye inopafoni browsers. AMP mutoro kanomwe kaviri uye ine simba rekuwedzera kuchinjwa uye kudhura kuburikidza nemitengo.
3. Shandisa runyoro rwezvinhu zvakapoteredza mapfumbamwe.
Nhamba yezvikwata ichabatana zvakanaka nemupumburu muduku kuti uvhare webhucontent. Icho chimwe chezviitiko zvevashandisi zvinhu Google algorithm inoshandisa kufuta nzvimbo.
4. Shandisa mifananidzo zvakasarudzwa.
Kushandisa zvifananidzo inzira inoshamisa yekufambisa shoko rako kumubatsiri mune nyorenzira. Zvisinei, mifananidzo yakawanda inogona kukurudzira iwe zvakanaka. Shandisai mifananidzo ina iyo inofanira kunge yakanyatsokonzerwa nekugadzirisa mamiriro evanhu saiyepamwe chete nehuwandu hwefaira yefaira uye chigunwe chechigadziko kuitira nyore nyore. Uku kugadziriswa kuchachengetedza nzvimbo yako yekutsvaga kubva pakudonha.
Tsanangudzo tsanangudzo ndeimwe yehutano hwe SEO hunofanira kushandiswa iwecontent. Kuisa mazwi makuru nemamwe mazwi akafanana mumutumbi wemashoko ako achaita kuti nzvimbo yako yefaira ive nehuwandu hunobatsira huripoYour ranking.
6. Mhizha dzezvemagariro ekubatanidza kushandiswa kunobudirira.
Zvemagariro evanhu ane simba rekuwana mamiriyoni evashandisi vanofarirazvinyorwa online. Zvinopfuura 77% zvezvose zviri muIndaneti zvinopfuura kune vashandisi kuburikidza nemasangano ezveMagariro evanhu seAssApp uye FacebookMumiririri weMusha weKutsvaga Kugadziridza. Desktop traffic ndeye 26% apo iyo yefoni iri pa16%. Iyi data inoreva kuti mafoni anofanirwa kugadziridzwapane zvinyorwa zvepaini paunenge uchishanda pamotokari uye kutenga.